रिचार्जरमा मोबाईल किन्दा खसी उपहार ! अर्डर गरेको ३ घण्टामै डेलभरी « GDP Nepal
रिचार्जरमा मोबाईल किन्दा खसी उपहार ! अर्डर गरेको ३ घण्टामै डेलभरी
Published On :2October, 2018 4:31 pm
काठमाडौं । बडा दशैँको अवसरमा मोबाइल एप रिचार्जरले मोबाईल किन्दा खसी उपहार योजना सुरु गरेको छ । रिचार्जरको एप मार्फत मोबाईल खरिद गर्ने ग्राहकलाई यसपालिको दशँैमा रिचार्जरले खसी उपहार दिने भएको हो ।
‘दशँैको खसी घरमै बसी बसी’ योजना यहि असोज १६ गतेदेखि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो योजनामा सहभागि हुनका लागि असोज १६ गते मंगलबारदेखि २९ गते सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्ममा रिचार्जरको एप मार्फत मोबाईल खरिद गर्नुपर्नेछ । यसअवधिमा एप मार्फत मोबाइल खरिद गर्ने ग्राहकलाई ग्रोलाप्रथा मार्फत खसी उपहार प्रदान गरिने रिचार्जरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निराजन सिंहले जानकारी दिए ।
यो योजना सिमित ब्राण्डका मोबाईल फोनहरुमा मात्र लागू हुने रिचार्जरले जनाएको छ । खसी विजेताको घोषणा असोज २९ गते सोमबार मोबाइल एप रिचार्जरको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत लाइभ घोषणा गरिने छ ।